Appy Pie App Builder: Sariaka amin'ny mpampiasa, tsy misy kaody fampiharana tranokala | Martech Zone
Zoma, Martsa 27, 2020 Zoma, Martsa 27, 2020 Jayraj Shetty
Application Development dia indostria mivoatra hatrany. Miaraka amin'ireo orinasa marobe miha-maniry ny hisian'ny fisian-tserasera dia tapaka ny asan'izy ireo ho an'ny fampandrosoana. Nisy ny fitomboan'ny fangatahana fampiharana izay namorona tsena manenika ireo mpamorona efa misy. Ho fanampin'izay, indostria tratry ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny fitaky ny fitakiana. Ankoatr'izay, ny fampiharana efa misy dia mitaky fikojakojana tsy tapaka. Ny fikarohana dia manondro izany 65% amin'ny loharanom-pahalalana lany amin'ny fiezahana hihazona ireo fampiharana efa misy ho an'ny orinasa.
Ny fikambanana dia mety ho tafavoaka velona hatramin'izao, fa ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny fampiasam-bola ilaina hitazomana sy hanavao miaraka amin'ny fampiharana azy ireo dia manome sary mampatahotra ho an'ny hoavin'ity indostria ity. Ara-dalàna raha mitolona amin'ny fampandrosoana AGILE ny ankamaroan'ny fikambanana ary samy hafa ny fahombiazany. Na izany aza, misy teknolojia vaovao manome ny fikambanana vahana handroso amin'ny tsena, hampihatra ny AGILE, hampihena ny vidiny ary hampiakatra isa. Tsy fivoarana fampiharana tsy misy kaody izy io.
Tsy misy kaody no hoavin'ny fampandrosoana ny fampiharana. Raha ny kaody dia indostria ho hita mandrakariva, tsy misy kaody natao hanamorana ny fizotran'ny fampiharana. Araka ny a fanadihadiana vao haingana, 40% amin'ireo fikambanana na tsy naka kaody na mikasa ny handray izany amin'ny taona ho avy.
Appy Pie App Builder Famakafakana
Appy Pie dia manome vahaolana fananganana rindrambaiko ho an'ny fikambanana sy ny olona. Ny mpanamboatra rindrambaiko tompony dia iray amin'ireo rindrambaiko fanaovana fampiharana tsara indrindra eny an-tsena ankehitriny. Fantatra amin'ny toetran'ny mpampiasa azy, ny mpanamboatra fampiharana dia afaka manampy anao hanao fampiharana ao anatin'ny minitra vitsy. Appy Pie dia mamela anao hamolavola fampiharana Android, iPhone ary PWA ho an'ny mpanjifanao. Miaraka amin'ny endri-javatra latent 200 mahery, ny fampiharana ny fampiharana dia tsy mora na haingana kokoa.
Appy Pie App Builder 5 taona mahery kely. Tao anatin'izay 5 taona izay dia navelan'izy ireo hanao fampiharana an-tapitrisany ny olona sy ny orinasa. Manohana ny matihanina mpamorona, ny rindrambaiko manana interface tsy misy kaody tanteraka izay mampihena be ny fotoana fampandrosoana. Ho fanampin'izany, mampihena ny fizotran'ny fitazonana sy fanavaozana ny fampiharana amin'ny tsindry vitsivitsy ihany koa izy. Amin'ny Appy Pie, azonao atao ny manamboatra fampiharana isan-karazany toy ny fampiharana media sosialy, fampiharana ara-barotra, fampiharana fanampiana mpanjifa, fampiharana AR / VR, fampiharana trano sy trano sns.
Miaraka amin'ny interface tsotra sy intuitive an'ny Appy Pie, ny fanaovana fampiharana dia azo hamarinina sy hotsorina.
Inona no mampiavaka an'i Appy Pie App Builder:
Drafitra dashboard madio namboarina ho mora fitetezana.
Endri-javatra maherin'ny 200 toy ny fampandrenesana fanosehana, fahaizan'ny VR, haino aman-jery sosialy tafiditra sy chatbot
Fanohanana famoahana tanana amin'ny fivarotana fampiharana. Ny fotodrafitrasa fanampiana mpanjifa tena tsara dia midika fa eo foana i Appy Pie hanampy anao.
Appy Pie dia eo am-pelatanana miaraka amin'ny rindrambaiko, mamorona vokatra vaovao sy tsara kokoa isan'andro. Nanomboka tamina mpamorona tsy misy kaody mora izy ireo ary nampihatra filozofia mitovy amin'izany mba hamoronana mpamorona tranokala tsy misy kaody, chatbot ary rindrambaiko famolavolana sary. Appy Pie amin'izao fotoana izao dia tsy mikasa ny hanakorontana ny indostria IT miaraka amina mpamorona app tsy misy kaody ary mikendry ny hampifangaro ireo rafitra lova mba hahazoana antoka fa mitombo miaraka ny indostrian'ny fampandrosoana.
Ny tena kaody tsy misy kaody dia mety ho lavitra be, fa ny Appy Pie dia namolavola rindrambaiko iray izay afaka hikarakara ireo asa mavesatra rehetra tafiditra amin'ny fampivoarana ny fampiharana, manampy ireo fikambanana na aiza na aiza hamafa ny backlogs ary hamorona fampiharana mahay miaraka amin'ny ezaka kely kokoa. Ny tena ace an'ny tanan'ny App Builder dia ny fanamorana ny fikojakojana ilaina amin'ny fampiharana. Miaraka amin'ilay mpanamboatra ny fampiharana, ny fanavaozana dia mitaky tsindry tsotra vitsivitsy monja mamela ireo fikambanana hifantoka amin'ny ezaka ataon'izy ireo amin'ny fanavaozana sy hitahiry ireo loharano tena ilaina mba hamaly ny filan'ny indostria.
Mamorona fampiharana amin'ny Appy Pie
Mora kokoa noho ny noeritreretinao ny famoronana fampiharana amin'ny Appy Pie. Dingana 3 tsotra izy io.
Register - Midira amin'ny Appy Pie. Ao amin'ny dashboard anao, eo ambanin'ny tabilao famolavolana, mifidiana modely endrika ho an'ny fampiharana anao. Appy Pie dia manome modely an-jatony hisafidianana. Amboary ny modely arahinao ary safidio ny loko, ny endritsoratra ary ny fisehonao. Ampidiro ny sary famantarana ny marikao.
Ataovy miavaka - Ny dingana manaraka dia ny fampidirana endri-javatra amin'ny fampiharana anao. Ao amin'ny takelaka fisehoan-javatra, azonao atao ny mitady ny endri-javatra ary avy eo dia tsindrio ny endri-javatra iray hanampiana azy amin'ny app anao. Azonao atao ny manamboatra ny endriny tsirairay mifanaraka amin'ny tanjonao amin'ny fomba tsara indrindra. Karazana rindranasa an-tapitrisany maro no azo noforonina tamin'ny fanaingoana azo alaina ao amin'ny solaitrabe fananganana fampiharana.
fitsapana - Raha vantany vao tafapetraka amin'ny volavolanao sy ny endri-javatrao ianao, andramo fotsiny ny app anao amin'ny fitaovana iray ary aorian'ny fahafaham-ponao dia avoaho amin'ny App Store na Play Store, na izy roa.
Izay no tokony hataonao mba hamoronana fampiharana amin'ny Appy Pie. Mivoatra ny fivoaran'ny app. Tsy misy kaody ny dingana manaraka tsy azo ihodivirana amin'ity fivoarana ity. Appy Pie dia manome vahana ho an'ny orinasa rehetra handroso mialoha ny fiolahana. Ny fitomboan'ny fananganana tsy misy kaody sy ny fampandrosoana haingana ny sehatra dia manome ho avy mamiratra ho an'ny rehetra.
Midira amin'ny revolisiona tsy misy kaody anio! Ho an'izay miasa ao an-trano dia miarova tena!
Midira ho an'ny Appy Pie
Tags: appie piefampiharana raharaham-barotrafampiharana fanohanan'ny mpanjifatsy misy kaodympanamboatra fampiharana tsy misy kaodyfampiharana media sosialy
Jayraj dia mpanoratra afa-po izay ny tanjony amin'ny fiainana dia ny polymath. Mbola tsy teo izy fa ny fikatsahany dia nanome azy fahalalana be momba ny zavatra maro. Miezaka mizara ny fahalalany amin'ny alàlan'ny fanoratana izy. Amin'ny fotoana malalaka ananany dia miserasera amin'ny Internet izy, mandehandeha lavitra ary manandrana milalao. Tiany ny fitiavana toa an'i Terry amin'ny fitiavana!
Torohevitra momba ny varotra varotra avy amin'ny birao an-trano